China Net Frame, Heterosexual Structure Class orinasa sy mpanamboatra | Zhenyuan
Ny singa fototra ao amin'ny zana-kazo dia ny triangular cone, triangular body, cube, truncated quadrangle sy ny sisa. Ireo singa fototra ireo dia azo atambatra mba hamorona tripod, quadrilateral, hexagonal, boribory, na endrika hafa amin'ny endrika planar. ny tombony azo avy amin'ny habakabaka, ny lanja maivana, ny hamafiny lehibe, ny fahombiazan'ny seismika tsara, sns. azo ampiasaina ho tafo fanaovana gymnasium, teatra, efitrano fampirantiana, efitrano fiandrasana, kofehy mijoro amin'ny kianja, hangar fiaramanidina, firafitra lehibe roa-lalana sy atrikasa ary tranobe hafa.
Fanasokajiana ny takelaka:
Ny kilasy voalohany dia misy ny rafitry ny fiaramanidina truss, izay misy endrika efatra, dia ny, ny zoro roa-orthogonally straighting grid, ny zoro roa-orthogonally-tendrena mametraka, ny-direction oblique Laying Layting ary ny telo-direction fironana lay.
Ny karazany faharoa dia misy singa piramida quadrilatera. Misy endrika dimy: grid quadrilateral positive, grid quadrilateral positif, grid quadrilateral oblique, checkerboard quadrilateral grid ary kintana quadrilateral grid.
Ny karazany fahatelo dia misy singa piramida telozoro. Misy karazany telo ny harato piramidana telozoro, harato tropy fitrandrahana ary harato vita amin'ny trondro tantely. Araka ny endrika vatan'ny akorany, ny firafitry ny akorany dia azo zaraina ho akorandriaka, akorandriaka ary akorandriaka parabolic hyperbolic. Araka ny fitaovana ampiasaina amin'ny rafitry ny grid , misy ny kofehy vy, ny kofehy vita amin'ny beton ary ny vy ary ny valiny mitambatra vita amin'ny beton, izay ny grid vy no ampiasaina bebe kokoa.
Famakafakana ny hery anatiny an'ny grid:
Ny rafitra grid dia rafitra rafitra tsy voafaritra miorina amin'ny statistika. Amin'ny famakafakana ny truss karazana plate, dia heverina matetika fa mifamatotra ny tonon-taolana, ary ny enta-mavesatra ivelany dia mihetsika amin'ny tonon-taolana mifanaraka amin'ny fitsipika mitovy amin'ny statika, izay mety ho kajy arakaraka ny fomba famindrana truss habakabaka, dia ny fomban'ny singa voafetra amin'ny rafitra tsorakazo mihantona. Ny fomba fanisana notsongaina, toy ny fomba famakafakana ny rafitra sisin'ny hazo fijaliana sy ny fomba toy ny takelaka, dia azo ampiasaina ihany koa hanisana ny hery anaty sy ny famindran-toerana. Ny akorany akorandriaka tokana amin'ny ankapobeny dia raisina ho henjana mifangaro, izay tokony hikajiana araka ny fomban'ny singa voafetra amin'ny rafi-piaraha-mitambatra. Ny takelaka misy akorandy roa dia azo isaina amin'ny alàlan'ny fomba fampiasa voafetra amin'ny rafitra tsorakazo mihantona. -ny fomba rehetra dia azo ampiasaina hanamorana ny fikajiana ny firafitra tokana misy sosona sy sosona roa sosona.
Rafitra famolavolana ny grid:
Ny fizarana hazo fijaliana dia tokony ho faritana arakaraka ny fikajiana ny tanjaka sy ny fitoniana. Mba hampihenana ny halavan'ny tsindry tsindry ary hampiakarana ny fahamarinan-toerana dia azo raisina ny fepetra toy ny fampidirana ny bara mipetaka sy ny bara mpanohana. ny karazan-takelaka takelaka sy ny vatan-kazo roa vita amin'ny vy dia misy endrika telo lehibe indrindra: ny vatan'ny hazo fijaliana, ny vatan'ny baolina lavaka ary ny fantsom-bolt. Ny lovia hazo fijaliana dia mety amin'ny rafitry ny vy vy , ary ny tsorakazo sy ny lovia iaraha-miasa dia ampifandraisina amin'ny fehin-kibo na kofehy mahery vaika. Ireo kitrokely baolina miaraka sy kofehy baolina kambana dia mety amin'ny rafitry ny fantsom-by. Ny firafitry ny firafitra tokana sosona tokana dia tokony haharitra amin'ny famoritana hery anaty. Amin'ny ankapobeny, ny fanjifana vy ataon'ny tonon-taolana dia mitentina eo amin'ny 15 ~ 20% amin'ny vy ampiasaina amin'ny firafitry ny rafitry ny velarana ....
Drafitry ny gorodon'ny rafitra harato
Drafitry ny gorodona
Drafitra famolavolana teboka grid
Drafitra ny chord ambany an'ny frame net
3D node famolavolana sary ny grid
Previous: Drafitra fananganana rano sy herinaratra
Manaraka: Miorina firafitry ny membrane
Famolavolana trano vita amin'ny vy